INGABE UWOYELA WESIHLAHLA SETIYE UYASEBENZA EKWELAPHENI AMA-KELOIDS? - UMNYUZONG.COM - UBUHLE
Ingabe Uwoyela Wesihlahla Setiye Uyasebenza Ekwelapheni Ama-Keloids?
Ikhaya Ubuhle Ubuhle lekhaka-RASHMI B G By URashmi B G ngo-Agasti 3, 2018
Isikhumba yingxenye ebucayi kakhulu yomzimba womuntu. Wonke umuntu ufisa ukuba nesikhumba esihle futhi esikhanyayo. Eminyakeni yamuva nje, kube nokuningi okusha emkhakheni wokunakekelwa kwesikhumba.
Kungaba ehlobo noma ebusika, isikhumba isitho esisodwa esihlala sisesichengeni. Kungenye yezitho zomzimba womuntu, ezidinga ukunakekelwa njalo.
Naphezu kwayo yonke imizamo yokunakekelwa kwesikhumba, bambalwa abantu abahlushwa izinkinga zesikhumba okunzima ukwelashwa. Isibonelo, izibazi, izinduna, ama-keloids, ukuvuvukala, njll.
Kulezi, i-keloid ingenye yezinkinga ezinkulu, lapho ukwelashwa kungaziwa khona ngqo.
Ngakho-ke Yini Ama-Keloids?
Lapho isikhumba silimele, izicubu ezinemicu ezibizwa ngokuthi izicubu ezibomvu zakhiwa zizungeze isilonda futhi lapho lesi sicubu sikhula ngokweqile, kwakhiwa ama-keloids.
Imvamisa, lapho isikhumba silimele, umzimba ukhiqiza amaseli e-collagen azungeze isikhumba esonakele ukuvikela indawo elimele, okuholele ekutheni kube nesibazi. Ezimweni eziningi, isibazi siyancipha ngokuhamba kwesikhathi futhi isikhumba sibuyele kokujwayelekile. Kepha kwesinye isikhathi, isibazi siqala ukukhula kakhulu futhi sibe sikhulu kunenxeba langempela, okuholela kuma-keloids.
Ama-Keloids atholakala kakhulu esifubeni, ezihlathini, ezindlebeni nasemahlombe. Kepha kungenzeka kunoma iyiphi ingxenye yomzimba. Zenziwe ngokungajwayelekile futhi zikhulisa ngokuhamba kwesikhathi. AmaKeloid ngokuvamile awanabungozi futhi awanabuhlungu, kepha ambalwa angadala ukulunywa nokucasuka okuzungeze indawo.
Yini Ebangela ama-Keloids?
Ukusika noma ukubhoboza
AmaTattoos / ukubhoboza
Izixazululo Zasekhaya Zokwelapha Ukwelashwa Keloids
AmaKeloid ngokuvamile awadingi ukunakekelwa kwezokwelapha. Bangakwazi ukuzitholela ngokwabo futhi belashwe ngamakhambi asekhaya. Ukwelashwa okuphumelela kakhulu kungaba ngokusetshenziswa kukawoyela wetiye.
Uwoyela wesihlahla setiye uwoyela okhishwe emaqabungeni esihlahla setiye iMelaleuca alternifolia, esidabuka eQueensland naseNingizimu Wales, e-Australia. Ungamafutha abalulekile anezinzuzo ezahlukahlukene zesikhumba nezinwele. Ekuqaleni, uwoyela wesihlahla setiye wawusetshenziswa njengomuthi wendabuko wokwelapha ukukhwehlela nokubanda.
Uwoyela womuthi wetiye uqukethe izinto eziningi ezisiza ukulwa namagciwane kanye nabanye abahlaseli bangaphandle. Kungenxa yale mpahla kawoyela wetiye, ukuthi isetshenziswa kakhulu ukwelapha izinkinga zesikhumba nezempilo ezahlukahlukene.
Izinzuzo Zamafutha Wesihlahla Setiye Esikhunjeni:
Ngezakhi zayo ezinamandla zokulwa namagciwane kanye ne-antioxidant, uwoyela wesihlahla setiye ungenza izimangaliso zesikhumba, uma usetshenziswa ngempumelelo. Kungasiza ukwelapha izinkinga zesikhumba ezahlukahlukene njenge:
Izinduna kanye ne-eczema
Ukusikeka kanye nezifo
Ngakho-ke Ungayisebenzisa Kanjani Amafutha Wesihlahla Setiye Keloids?
Uwoyela womuthi wetiye uthathwa njengobaluleke kakhulu ekwelapheni ama-keloid, ngenxa yezakhi zawo zokulwa namagciwane, anti-inflammatory kanye nama-antiviral.
Nciphisa amaconsi ama-2-3 kawoyela wetiye ku-1 tbsp wamanzi.
Faka lokhu endaweni ene-keloid ngosizo lukakotini pad.
Yiyeke imizuzu engu-15-20 bese ugeza.
Phinda kanye ngosuku
Uwoyela womuthi wetiye usiza ekufakeleni izibazi amanzi bese unciphisa ukubonakala kwazo. Kuvimbela ukwanda kwezicubu ezibomvu futhi kusheshise ukuphulukiswa kwesilonda ngokunciphisa usayizi waso. Kuyasiza ukulwa namagciwane athelela amanxeba futhi awaqinise.
Amafutha We-Aspirin Netiye Wama-Keloids
3-4 amaphilisi e-aspirin
1-2 tsp amanzi
I-2-3 yehlisa uwoyela womuthi wetiye
Thaka amaphilisi e-aspirin bese uwaxuba namanzi aze abe unamathisela obushelelezi.
Faka le ngxube kuma-keloid bese uyiyeka yome imizuzu engama-20-30.
Ngemuva kwalokho, hlambulula unamathisela ngamanzi.
Cwilisa iphedi likakotini emafutheni esihlahla setiye bese ulisebenzisa kuwo wonke umgudu keloid.
Phinda lokhu kanye ngosuku ukuze uthole imiphumela emihle.
I-Aspirin isidakamizwa esingeyona i-steroidal ne-anti-inflammatory. Isicacisi sesikhumba esisiza ukwelapha izibazi futhi sinciphise ukukhula keloid. Kokubili i-aspirin kanye no-oyela wesihlahla setiye kunezinto ezisiza ukunciphisa izibazi nokuzikhanyisa. Ngakho-ke kuyindlela yokwelapha ephumelela kakhulu yama-keloids.
Amafutha weLavender Namafutha esihlahla setiye AmaKeloids
U-2-3 wehla uwoyela we-lavender
U-2-3 wehla uwoyela wesihlahla setiye
Hlanganisa womabili uwoyela we-lavender nowoyela wetiye ngamanani alinganayo.
Cwilisa iphedi likakotini enhlanganisweni kawoyela bese uyisebenzisa ngaphezulu kwesifunda se-keloid.
Yiyeke imizuzu engu-25-30 bese ugeza ngamanzi.
Phinda kanye nsuku zonke ukuthola imiphumela esheshayo.
Uwoyela wesihlahla setiye ubulala ukutheleleka okubanga ama-keloids. Amafutha e-lavender aphikisana nokuvuvukala okusiza ukunciphisa usayizi wama-keloids futhi kuvimbele ukukhula.
Usawoti Wolwandle Nosawoti Wesihlahla Se-Keloids
1 tsp usawoti wasolwandle
2 tbsp amanzi
U-3-5 wehla uwoyela wesihlahla setiye
I-aloe vera gel (uma uthanda)
Shisisa amanzi bese uncibilikisa usawoti wasolwandle kuwo.
Faka isisombululo sikasawoti ku-keloid usebenzisa iphedi kakotini.
Yishiye imizuzu engu-5-7 bese ufaka uwoyela wesihlahla setiye umboza yonke indawo keloid.
Lapho uwoyela wetiye usumunciwe, gcoba i-Aloe vera gel ukuthambisa isifunda (uma uthanda).
Phinda le nqubo kanye noma kabili ngosuku.
I-saraswati mantra yokuhlushwa ezifundweni
Usawoti wasolwandle umuthi obulala amagciwane osiza ukunciphisa ukutheleleka kanti uwoyela wetiye unciphisa ukukhula nokuvuvukala. Ngakho-ke kuyikhambi eliphumelelayo.
Uwoyela womuthi wetiye yikhambi elihle lasekhaya lokwelapha izibazi zamakheli ezinhlobo ezahlukene. Ukusetshenziswa kukawoyela wetiye ngokuhlanganiswa nezinye izithako kungasiza ukunciphisa usayizi nokukhula kwama-keloids.
Manje kungani ulinda? Qala ukusebenzisa la makhambi manje ukuqeda ama-keloids!
Ilayisi Elinsundu, Elimhlophe, Elisendle noma Elibomvu: Yiliphi Ilayisi Elilungele Ukunciphisa Isisindo?
Izixazululo Zasekhaya Zokuqeda Izinwele Ezimhlophe Kalula
Ama-Celeb Agqoke Kahle Kakhulu Kakhulu Nakakhulu Ku-The Big Zee Entertainment Awards 2017
Ungasisebenzisa Kanjani Utamatisi Ukuthola Isikhumba Nezinwele Ezimangalisayo
Ungasisebenzisa Kanjani Isipinashi Ekukhuleni Kwezinwele
Ngo-2018: Ukubikezelwa KweHososcope KweCapricorn
I-Daily Horoscope: 22 Ephreli 2020
Izindlela Zemvelo Eziyi-12 Zokumhlophe Izinkinobho Ezimnyama Ekhaya
Ukuba Ne-Loose Motion & Ungazi ukuthi Uzophuma Kanjani? Zama Lezi Zixazululo Zasekhaya Ezi-15 Ukuze Uthole Ukushesha Okusheshayo
Utamatisi Garlic Chutney: Isitayela saseNdiya!
UMalaika Arora Khan Emshadweni Ka-Arpita Khan: Izithombe
Uhlelo Lokudla Ukwehlisa Isisindo Ngemuva Komshado
ungagcina kanjani ukukhukhumeza izinwele
nini umkhosi we-varamahalakshmi ngo-2016
nkosi rama wayenodadewabo
Dal amagama ngesiNgisi anezithombe
umphumela woju ngamanzi afudumele
Izinyanga eziyi-8 ukhulelwe okufanele ukulindele